The World ee Android Games aad ka ogaato Adult Best
Ma kulan oo kaliya loogu talagalay carruurta la ciyaari doono? Waa hagaag, ii jawaab ma jirto. Game waa nooc ka mid ah cuntada oo la soo xaaqay hore ee carruurta iyo dadka waaweyn. Dadka waaweyn sidoo kale ku qarisaan naftiina karo, oyna la kulamada. Game waa nooc ka mid ah ul sixir in Fiienaada hawlaha dhaqdhaqaaqa nolosha fud galay. Adult Android Games suuqa xoog ku soo galeen ay rating kacsantahay iyo malaayiin dadka isticmaala. Sidaas halkan waxaan aad soo toban Adult kulan Android sare oo ka farxiyaa doonaa maankiinna oo ku siin Guux xoogaa ah gargaar ah. Hadda dooran qaado ka liiskan oo la soo bandhigay dunida ah oo lacag la'aan ah kartiba oo waxaa ka buuxsamay farxad iyo biimayn.
Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan kulan android dhehay ee dadka waaweyn. Storyline ee kulankan gebi ahaanba waa kaamil ah oo sax ah si gaar ah loogu talagalay dadka waaweyn. U dhici karaan kulankaan ka horyimaadeen reyreyn, farax iyo markooda badan oo ciyaarta twists.This Android Adult waa bilaa lacag si aad hubaal lahaa jeclahay inaan wax ka ciyaaro.
2. Dark warkii
Deegaanka oo cabsi leh, daadadka ee dhiigga iyo Vampires hubaal kugu cabsi galin doonaa. Dark Legend gabi ahaanba waa ciyaar Adult Android ah loogu talogalay gaar ahaan loogu talagalay dadka waaweyn. Tani waa vampire taxane naxdin leh naqshadeynta 3D iyo lacag la'aan ah oo ah qiimaha oo gebi ahaanba qabsadaan adiga hortaadaba ku sameeyeen.
3. Texas HoldEm turub Deluxe
Tani waa mid ka mid ah ugu degdeg ah u koraya ciyaarta turub Adult on Android la malaayiin users ka diiwaan gashan. Waxaa jira 5 ilaa 9 pokers miis oo aad qabtid in ay toogtaan baxay tartamada Turub. Kulankaan ayaa waxa uu u naqshadeynta fiican soo bandhigay heer sare ah.
4. Cake ciyaarta Hadda-Karinta
Haddii aad cunto ku caashaqay ka dibna ciyaarta surly eryi doono aad waalan. Kulankaan ayaa ku siin doonaa fursad uu ku moofadiina dubtay aad jeceshahay iyo qurxin iyaga sida aad wish.This delicious Adult Android ciyaarta waa bilaa lacag. Erayga 'cake "hubaal ka dhigi doonaa dhibco Afkaaga biyo. Sidaas joojin noqonayaan iyo soo bixi kulankaan yummy.
5. Wedding My abuurtay: Xisbiga
Kulankaan Android Adult runta ah waa ciyaar jaceyl oo aad u leeyihiin in ay doortaan ninkaaga soo jiidasho iyo kooxaha kala duwan ee doorashada. Kulankaan ayaa si buuxda u beddeli doontaa niyadda iyo aad qaadan doonaa oo adduunka kale.
6. u Hit Rich! Wareejinta Casino Free
Kulankaan Adult Android fudud yahay kulanka uu halyeey oo aad u ciyaaro naadi soo bandhigeen saaxiriinta, galmada iyo magaalada, terminator ah iyo qaar badan oo. Markii hore aad leedahay 30,000 oo lacagta birta ah oo lacag la'aan ah oo aad lacagta birta ah oo dheeraad ah oo lacag la'aan ah ka heli kartaa maalin kasta bonuses.So taasi xaqiiqdii waa bilow hodan.
7. Dark Arcana: Damaashaadka
Damaashaad ah lama raadin karo ayaa yimid magaalada, siday madmadowga walaac u leh. A yar yar hooyada ayaa la waayay iyo hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u soo qaato oo caqabad ku ah oo ka heli mid ka mid ah la waayay. Waxaad in la baaro labada Caalamka ka mid ah, taas oo aad ku nooshahay iyo mid kale waa diyaarad oo ka jira dambeeya damaashaad ee hall ee muraayadaha. Kulankaan ayaa waxaa ka buuxda xaaladaha khayaanada oo aad u iman doonaan inay ogaato oo ku saabsan kuwa sharka leh iyo sidoo saabsan sheekada qof shaqaale damaashaad. Kulankaan diirsado doonaa maskaxdaada yara, laakiin waxay ku xiran tahay in aad on in sida aad u ogaan doonaa qarsoodiga this ciyaarta Adult cajiib Android.
8. Bard ee Sheekada
Bard ee Sheekada waa mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badnaa dadka waaweyn loogu Android. Kulankaan ayaa waxa uu sawiro 3D fiican soo bandhigay fiican oo waa furaha ugu muhiimsan ee qabsaday isha ciyaaryahanka. Kulankaan waa xarunta ah ee soo jiidashada ee dhammaan dadka ku dabiiba fiican ratings Google play. Kulankaan ayaa waxa uu adduunka u baaxad weyn si ay u sahamiyaan magaalooyinka tirinta, magaalooyinka, Wabiyaal, kaymaha, iyo Daar wayn, buuraha barafka, meelaha dabataagan, iwm Kulankan oo aad ka qabto 50 nooc oo cadaawayaashooda, 16 characters sixir ah iyo 150 weerar madaafiic ku gaar ah.
Kulankaan Adult Android qiimihiisu yahay $ 15.48. Muuqaalada kulankaan ayaa si shakhsi ah loogu tala galay oo ay Kazuko Shibuya, waa mid ka mid ah ugu fiicnaa samaynta graphic oo. Isagu wuxuu isu soo shaqeeyay on jilayaasha ee ciyaarta. Cibaaro daro awood u leh inuu ka ciyaaro oo dhan jilayaasha ugu waaweyn sida geesiga ciyaarta ee. Storyline ayaa horeysay ee ciyaarta waxaa kasbadaan quluubta dad dhowr ah oo kulankaan waxaa loo arkaa inay mid ka mid ah kulamada ugu badan lagu qiimeeyo ee Android.
10. Nuqulka Baldur ee Gate xoojiyay
Kulankaan Adult Android waa dhan oo ku saabsan waxa Agtooda ah iyo adventures ka faaidaysta. Waxaad ku arki doonto iyo saaxiriinta, Red daran iyo waxyaabo badan oo aad u xun. Waxaad arki doontaa wax cabsi iyo dhiig ku wareegsanaa oo dhan. Sidaas muujiyaan dhiiranaan iyo loogana cajiibka ah ciyaarta.
> Resource > Emulator > Adult kulan Best The World ayaa android in aad ogaato